Malay Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(545 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ...Mhando zhinji dzokubhejera zviri pamutemo muMalaysia, asi nekuda kwezvikonzero zvechitendero, VaMuslim vemunharaunda havabvumidzwe kutora chikamu muvaraidzo yakadaro. MuMalaysia, kune mitambo yekasino, michina yemitambo uye malotari. Kunze kwekumhanya kwemabhiza, ese marudzi ekubheja emitambo anorambidzwa. Muna 2010, kuyedza kwakaitwa kudzoreredza kubheja kwemitambo, asi chete yakapihwa rezinesi yakakurumidza kukanzurwa.
MuMalaysia, kune imwechete kasino Genting (Genting). Inzvimbo yakakura chaizvo uye inowanzo shanyirwa. Isu tinoona mune yedu yepamhepo kubhejera dhairekitori ndiyo chete nzvimbo munyika umo maMalay vanogona kutamba zviri pamutemo bhodhi uye makadhi mitambo. Kurongeka kwakadai kwakakonzera matambudziko ekushanda kwekasino kasino uye kubheja zvemitambo, izvo zvinogara zvichirwisa Hurumende yeMalawi.
Pakutanga, pamwe nekasino, kuMalaysia kwaive nemuchina wekubheja une mitambo yemakomputa, senge kusvetuka kwemagetsi Muna 2000, zvisinei, idzi diki diki dzekubhejera dzakavharwa nedanho rehurumende, nekuti zvine mhedzisiro yakaipa kuchizvarwa chechidiki chenyika.
List kuti Top 10 Australian Online Casino Sites
Mutemo online kubhejera muMalaysia kunoremadza iyi nzira yekubhejera. Hurumende haina kupihwa rezinesi rekuvhura kwamakasino munyika uye inotora matanho akakodzera ekuona kuti vatambi veMalaysia havakwanise kushandisa masuo ekunze. Varidzi veInternet cafe vanogona kubatwa nemhosva mukugadziriswa kwevatengi vayo kuwana nzvimbo dzepamhepo dzekasino.
Pakushandisa nzvimbo dzekubheja pamhepo pamutambo, vatambi veMalasian vanosarudza kushandisa masevhisi evabhuki, vane mahofisi muAsia. Kazhinji, sarudzo yakanakira vatambi vemuno - kudzivirira internet cafe uye masosi eAsia pamitambo kubheja.
Uye zvakare, mabhangi anorambidzwa kubva kuMalaysia mari inotumirwa kunzvimbo dzekubhejera online. Chero zvazvingaitika, mutemo uyu haunyatso kudzorwa, uye vabhejeri veMalasia vanoda kutamba paInternet, ndiyo nzira dzekudzivirira kurambidzwa uku. Zvakare, vamwe vevashandi vepasirese vekunze vanotopa mabasa avo mururimi rweMalay.
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuMalaysia
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuMalaysia, uye inopa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji. Iwe unogona zvakare kuverenga edu ongororo yepamhepo kasino masosi, kuti uzive akanakisa epamhepo kukwidziridzwa, mabhonasi uye sarudzo dzekubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuMalaysia.
Kubhejera mumaguta eAsia - Singapore
Guta-nyika yeSingapore ine yechipiri yakanyanya huwandu hwevanhu pakati pevane gumi pamusoro pehunhu hwevashanyi sevhisi. Vanhu vanouya pano kubva kumativi ese epasi kuti vazive hukuru hwetsika dzeAsia uye edza rombo rako. Ndekupi kwekuzorora uye kutamba paunofarira? Chii chekuona? CasinoTopLists inokuudza nezve indasitiri yekubhejera munyika ino nezvimwe zvinhu zvakawanda.
Singapore - zvishoma zvejogirafi uye nhoroondo;
Kubhejera kwakatenderwa kubvira 2005;
Ndiyo huru pane casino:
FYI nyika makasinos;
Makasino epamhepo muSingapore - anorambidzwa, akavharirwa, vatambi vanogona kuwana faindi kana mhosva yezvikwereti inosvika kumwedzi mitanhatu;
Zvinhu zvishanu zveSingapore nekero;
Chokwadi chinofadza pamusoro penyika nevanhu.
Nzvimbo yeSingapore uye mhemberero yakaitika kare
Singapura - nyika yechitsuwa (zviwi makumi matanhatu nenhanhatu nenzvimbo yakawedzeredzwa nekugadziriswa kwekugadzira), yakapoteredzwa nezvitsuwa zveMalaysia neIndonesia. Kwenguva yekutanga nyika ino inotaurwa muzvinyorwa zvezana ramakore rechitatu. Mumazana emakore gumi nemashanu kusvika gumi nematanhatu nyika yaive chikamu cheSultanate yeJohor, uye yakazove koloni yeBritain Humambo.
Kupfuurirazve Singapore yaive chikamu cheMalaysia. Muna 1965, nyika yakazivisa kuzvitonga kwayo, uye mumakore achangopfuura yakavimbika zvachose kuhurumende (kunyangwe mvura yekunwa yaifanira kutengwa munyika dzakavakidzana) uye nyika dze "nyika yechitatu" dzave nyika dzakasimukira zvikuru.
Mune nhoroondo yeSingapore hurumende yakaita basa rakakosha, Lee Kuan Yew (1959-1990), munhu uyu akaita kuti nyika ibudirire. Iye zvino inyika yeparamende ine mutungamiri anonzi Tony Tan.
Casinos uye Kubhejera muSingapore
Singapore - nyika ine mashoma zviwanikwa zviwanikwa. Ivo vanogara kuno kunyanya nekuda kwevanodyara mari uye vanofarira "hupfumi mamiriro" - yakaderera mitero nemakambani epasi rose.
Kusvika ku2005 munyika ino kwemakore makumi mana kubhejera kwaive kurambidzwa kwakazara, asi dambudziko rehupfumi rakazviita kuti rinzwike munyika ino. Panguva ino, Singapore rave rechipiri rakakura nzvimbo yekutamba mushure meMacao, ichisiya kunyange Las Vegas.
«Marina Bay Sands» - kasino hombe muSingapore
Iyo huru dhizaini iyi yakaoma ndeye 3 55-storey tower kukwirira kwemamita mazana maviri. Pamusoro peshongwe idzi pane chimwe chinhu chakaita kunge ngarava, rudzi rwe oasis ine dziva. Iyo dhizaini yakatenderwa nenyanzvi muFeng Shui. Yakavakwa yakaoma nedavno- muna 200 iyo kambani «Las Vegas Sands».
Nei paine chete 2 ice rink, hotera yakaoma pane saiti muna 2561 uye padziva repasirese repasirese rekushambira - indasitiri yemakadhi. Zvinokosha kucherechedza kuti mvura iri mubhesheni remvura inonaya. Pano iwe unowana zvakare nzvimbo dzekusimbisa muviri, maresitorendi, makirabhu, SPA salons, zvitoro. Pedyo nechivakwa chikuru pane miziyamu iri muchimiro chejasi. Iko kune zviratidziro zvehunyanzvi, dhizaini uye yepamusoro tekinoroji.
Uye zvechokwadi kuratidzwa kwekuomarara, iko kwakavakirwa zvese - kasino.
miganhu «Marina Bay Sands» zvinonakidza - 15,000 sq.m. Pano, vanoda kubhejera vanogona kutamba 2300 player slots, uye kutarisa kwavo kunomiririrwa nematafura mazana matanhatu emitambo yese inozivikanwa kubva kune yakasarudzika roulette uye baccarat kuenda kuPai Gow Poker. Zuva rega rega kune vangangoita zviuru makumi maviri nezvishanu.
Vhura kasino yaive diki kupfuura «Marina Bay Sands», pachitsuwa cheSentosa. Kune zvakawanda zvakasvibirira (ayo mapurani postorayus chengetedza dhizaini yacho yakaoma) uye varaidzo. Inonyanya kufarirwa ndeyeMaritime Museum «Iyo Maritime Zvakaitika Museum», paki yekuvaraidza ine mijenya ye "Universal Studios Singapore" Nhandare, yepasirese aquarium uye paki yemvura, tsime mukuremekedza dzidziso dzeFeng Shui «Gungwa reDoto» .
Casino inonakidza nevhoriyamu yayo uye akasiyana emitambo yakapihwa. Casino ficha - yakaisvonaka magirazi zvivezwa. Kubhadhara kunoitwa nekukasira, zvinwiwa zvisina-doro zvinopihwa mahara.
Kune vagari vemuSingapore vane mitemo yakaoma - vanofanirwa kubhadhara madhora zana zuva rega rega kuitira kodzero yekushanyira kasino. Kana kutenga tikiti ye $ 100 yekushanya kwegore. Nekudaro, iyo hurumende iri kushingairira kurwisa iyo Gamblers - kasino yega yega ine "nhema mazita" ekushandisa zvisirizvo mutambo. Iyi mari inoenda kubhajeti rehurumende kune rubatsiro.
Kune vatorwa mitemo yakapusa. Iwe unofanirwa kuve 21 uye unofanirwa kuunza pasipoti yako. Iko kune zvakare mashoma ekupfeka kodhi- mbatya dzinofanira kuve dzakatsvinda uye kwete kumahombekombe (mune zvikabudura uye mafiripi-mafiropiti hauzotenderwe)
Online Casino muSingapore
Mushure mekuvakwa kwenzvimbo-dzakavakirwa macasino hurumende yeSingapore yekufunga zvakadzama nezve kukamurwa kwekubhejera pamhepo. Mari haina kuyerera ichibva munyika. Kana pakutanga kune vhidhiyo slots, blackjack uye roulette yaive nemahara kuwana, asi ikozvino hazvisi.
Kukurukurirana kwe "kubhejera mutemo" wehurumende kunoitwa mu2014 uye kazhinji sarudzo ichave yekufarira kuvharwa kwakazara kwenzvimbo yeInternet kune vekune dzimwe nyika mabhuki nevashandisi vemitambo. Kubva kutanga kwegore ra2015 kwavharira vafambisi vakaita saIBCBet, SBOBet uye MaxBET. Zvese zvakauya pasi pekuvharirwa kwenzvimbo dzinosvika zana. Munguva yemutambo online isiri pamutemo bookmaker, iwe unogona kuwana faindi muhuwandu hweinenge 100 275 kana kuiswa mutirongo kwemwedzi mitanhatu.
Singapore inotora fancy yako, kwete chete yezvigadzirwa zvakasiyana-siyana uye ruvara rusina kujairika, asiwo ruvaraidzo.
Ferris wheel . Kero: 30, Raffles Avenue, kutenderera wachi. Naiye iwe uchawana inoyevedza maonero evakakwidziridzwa uye kunyangwe Indonesia neMalaysia (kana isina gore). Nzvimbo yepamusoro - 165 metres. Iko yakasununguka -yakatonhorera-yemhepo makapuleti, denderedzwa rakazara rinotora maminetsi makumi matatu
Paruwasi yeKurumbidza Studios Universal . Kero: 8 Sentosa Gateway. Kana uchida kutasva. Zviratidzo zvinonakidza uye mafirita - iwe pano.
Optical illusions Museum . Kero: 26 Sentosa Gateway, Resorts World Sentosa. Iyo miziyamu ine inopfuura zana kupenda uye 100D, chero munhu anogona kutora pikicha uye kubata ese maonesheni maoko.
Mapaki "Night Safari" uye "Rwizi Safari" . Kero: Rd Mandai Lake. Dzinosvika mhuka mazana maviri nemazana mashanu nemhuka dzenzizi dzinosvika mazana matanhatu nemazana matanhatu dzinogara mumapaki aya. Kune tramu ine rwendo rwakatungamirwa, iyo yakatenderera paki hombe kwemaminetsi makumi matatu nemashanu.
Clarke Quay . Nzvimbo: chiteshi chepasi pevhu - Clarke Quay. Nzvimbo yevashanyi yakazadzwa nevaraidzo, matsime, zvitoro nemabhawa. Iko kuita kwakanyanya kwazvo, kazhinji husiku.
Chokwadi chinofadza pamusoro peSingapore neSingapore
Singapore inonyanya kupisa zuva inogona kuwanikwa kunyange kana yakasvibiswa;
Singapore ine mitemo yakaoma uye saka yakachengeteka;
Vhura kambani mumaminetsi gumi - yakanyanya kudiwa rgistratsii pamutemo mubatanidzwa;
Hhando yezvikafu munyika munzvimbo yechipiri mushure meJapan;
Heuno mujaho wehusiku "Zvakanyatso-
Singapore kune mapepa enyika
0.1 List kuti Top 10 Australian Online Casino Sites
2.1 Kubhejera muMalaysia
2.2 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuMalaysia
3 Kubhejera mumaguta eAsia - Singapore
3.0.1 Nzvimbo yeSingapore uye mhemberero yakaitika kare
3.1 Casinos uye Kubhejera muSingapore
3.2 Online Casino muSingapore
3.2.1 Singapore zvikwezva
3.2.2 Chokwadi chinofadza pamusoro peSingapore neSingapore
3.2.3 Singapore kune mapepa enyika
mutambo wa ra